August | 2010 | အဓိပတိ
‘ဟေ့… ဒီနယ်မြေဟာ မင်းနှစ်ပါးက ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့ စိတ်လွတ်လပ်မှု နယ်မြေတွေ။ ဒီနယ်မြေမှာ ဒီခုနစ်ရက်မှာ လူတွေရဲ့… စိတ်တွေကို အစွမ်းကုန် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသနားတော်မူထားတယ်။ စီးပွားရေးတွေ၊ လူမှုရေးတွေ၊ ဒေါသ၊ လောဘ၊ မောဟတွေနဲ့ ဖိစီးထားတဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ကလေးတွေဟာ သနားစရာကောင်းလောက်အောင် သိပ်ကို မွန်းကျပ်ပိတ်လှောင်ခံထားရတာ။ ကဲ… အဲဒီစိတ်ကလေးတွေကို Continue reading →
ဝါခေါင်လဆန်း (၁၂) ရက်
ပွဲတော်ရဲ့အစည်ဆုံးနေ့ ထုံးစံအတိုင်း နေပူပူအောက်မှာ လူပင်လယ်လှိုင်းကြီးကို တွေ့နိုင်တယ်။
နတ်ဒိုးသံဟာ ပွဲတော်တစ်ကွင်းလုံးကို ဖုံးလွှမ်းထားတယ်။
ဘယ်နေရာသွားသွား နတ်ဒိုးသံကို ကြားနိုင်တယ်။
ကနားတဲခန်းများစွာက ကြွေခေါက်သံတွေဟာလည်း ဒီနေ့အဆူညံဆုံးပဲ။
ရှည်မျောမျော ကနားတဲခန်းလေးတွေပေါ်မှာ လူတွေ အပြည့်ဒူးလေးတွေ တုပ်လို့။ ကနားတဲခန်းတွေပေါ်က နတ်ကတော်အားလုံးမှာ နတ်တစ်ပါးပါး ပူးဝင်နေကြပြီး ထိုင်ရင်းနဲ့ ယိမ်းယိုင်နတ်ဝင်ကြတယ်။ များသောအားဖြင့်ကတော့ မင်းနှစ်ပါးနဲ့ ပခန်းဦးမင်းကျော်ပေါ့။ ဟိုကနားတဲပေါ်မှာ ဖေကြီးကျော်၊ ဒီကနားတဲပေါ်မှာလည်း ဖေကြီးကျော်၊ Continue reading →
ကနားတဲတန်းရှည်တွေ ကြားကနေ တရွေ့ရွေ့သွားနေတဲ့ ချွဲနွဲ့သံလေးကို ကြားတဲ့သူတိုင်း နားမထောင်ဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ Continue reading →
နတ်အုပ်မင်းရဲ့ နောက်နှစ်တန်းမှာတော့ ရှေ့တန်းမှာ တောင်လက် မိဖုရားကြီး နှစ်ပါး၊ မြောက်လက် မိဖုရားကြီးနှစ်ပါး ထိုင်တော်မူတယ်။ မိဖုရားကြီးတွေက အိုလှရှာကြပြီ။ ရှစ်ဆယ်ကျော် ကိုးဆယ်အတွင်း ရောက်ကုန်ကြပြီ။ Continue reading →
ရေတိုးစေတဲ့ ဝါဆို ဝါခေါင်လေရမ်းကားကြောင့် လမ်းခွဲကလေးဘေးက တူးမြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ညိုဝါရောင်ရေတွေ ပြည့်လျှံစီးဆင်းနေတယ်။ ရေရိပ်မိုးရိပ် ပွဲတော်ရိပ်ဟာ လမ်းခွဲပေါ်က လူတွေရဲ့စိတ်ကို လှုပ်ရှားစေတယ်။ မြူးကြွစေတယ်။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစေတယ်။ Continue reading →
မြန်မာတို့၏ ရိုးရာဓလေ့မှ နတ်တွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောရမည်ဆိုလျှင်ကုန်နိုင်ဖွယ် မရှိပါ ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အတွင်း(၃၇) ၊ အပြင်(၃၇)မင်းအပြင် ၊ထိုအတွင်း,အပြင်တွင် မပါဝင်သေးသော
ရိုးရာနတ်တွေလည်း အများအပြား ကျန်ရှိနေသေးသောကြောင့် ကျန်နတ် များကို နောက်ထပ်အဖွဲ့ သို့မဟုတ်
အလယ်(၃၇)မင်းအုပ်စုတစ်စုဖွဲ့ဦးမည်ဆိုလျှင် နောက်ထပ် အုပ်စုတစ်စု ထပ်မံပေါ်ထွက်လာနိုင်ဖွယ်ရာ
ရှိ၍ ထိုအုပ်စုနှင့်ပတ်သက်ပြီး နတ်များ၏ သမိုင်း ကြောင်းများကို အကျယ်ရေးပြရန်နေရာမပေးနိုင်ပါ ။ Continue reading →
ပီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးသည် ဆုံးပါးသွားလို့
“အသုဘ” သွားမေးဖြစ်တယ်။ အသက်က (၄၈)နှစ်။ ကျွန်တော့်ထက် တစ်နှစ် ငယ်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင်က ဆရာဝန်,မ။ ကင်ဆာရောဂါကို (၁၂)နှစ်ကြာအောင် ကြံ့ကြံ့ခံရင်း
နောက်ဆုံး လက်မြှောက် အရှုံးပေး သွားခဲ့ရတာပါ။ သမီးလေး (၃)ယောက်
နောက် (၂)ရက်ကြာတော့ ဂွတ်တလစ်မှာ နေတဲ့ ကျွန်တော့် အဒေါ်တစ်ယောက်
ဆုံးပါးသွားပြန်ပါတယ်။ သူကတော့ အသက် မငယ်တော့ဘူးလို့ ပြောရင်လည်း ရပါတယ်။
လေဖြတ်ပြီး အိပ်ယာထဲမှာ (၆)လ လောက် ဝေဒနာ ခံစားပြီးမှ ကွယ်လွန်သွားရတာပါ။
အလွန်ပင်ပန်း ဆင်းရဲပါတယ်။ အိပ်ယာထဲမှာ ကြာရှည်လဲလျောင်း နေရတဲ့ အတွက်
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ “အိပ်ယာနာ” (bed sore) တွေကြောင့် အပြင်းအထန်
နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို ခံစားပြီး ကွယ်လွန်သွား ရတာပါ။ မြင်ရတာ
မသက်သာလွန်းလို့ ဆုံးပါးသွားတာကိုဘဲ ၀ဋ်ကျွတ်သွားတာဘဲလေ လို့တောင်
သဘောထား မိ လိုက်ပါတော့တယ်။
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အလှူအတန်းပြုလုပ်သူများဟာ အလှူမှတ်တမ်း
ဘုရား၊ သိမ်၊ ကျောင်း၊ တန်ဆောင်း၊ ဇရပ် စသဖြင့် လှူဒါန်းမှုများကို ကမ္ဗည်းထိုး
ကြပါတယ်။ ၄င်းကို သွယ်ဝိုက်ပြောရလျှင်မဏ္ဍပ်တိုင်တက်သူများလို့ခေါ်ရမှာပါ။
ကောင်းသော ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလှူခဲ့သော အလှူဒါနကို ပြန်လည် အမှတ်ရ
အဲဒီအထဲကမှ သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားစွာမဏ္ဍပ်တိုင်တက်သူများလည်း
ရှိကြပါသေးတယ်။ သိင်္ဃသူ့သမီးကျောက်စာ၊ မိဘုရားဖွားစောကျောက်စာတွေမှာ
သူတို့ရဲ့အလှူကို မှတ်တမ်းတင်ရင်း အလှူရှင်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်း မျိုးရိုးဘယ်လို
မြင့်မြတ်ကြောင်းကို ဂုဏ်တင်ပြီး မဏ္ဍပ်တိုင်တက်ကြပုံကတော့ငါ့လင်သခင်မင်းကြီး၊
ငါ့သားမင်းကြီး၊ ငါ့မြေးမင်းကြီး ဆိုပြီး ခပ်ကြွားကြွား ဂုဏ်တင်ထားတဲ့ ကျောက်စာများကို
ကျွန်တော်တို့ ကြာဘူး တွေ့ဘူးကြမှာပါ။
ဇာတာ တစ်စောင်ကို စစ်ဆေး တော့မည် ဆိုပါက
Do not waste the time.Don’t kill time.
အချိန်သည်လူကိုမစောင့်။ အချိန်ကိုငွေကြေးနှင့် ရပ်တန့်လို့မရ။
၀ယ်လို့လည်းမရ။ လူတွေကသာ အချိန်ကိုစောင့်ကျသည်။
ဘ၀သေနေသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘ၀ကိုအချိန်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ပြီးတော့ သင်ဘယ်လောက်အချိန်တွေဖြုန်းခဲ့ပြီး
ပြီ။ အချိန်ဘယ်လောက်အကျိုးရှိရှိ အသုံးချခဲ့ပြီးပြီဆိုတာ ဆန်းစစ်ပါ။
တစ်နှစ်တစ်နှစ် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ လုပ်တဲ့လက်ထပ်ပွဲတွေဟာ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားလှပါတယ်။
လက်ထပ်ပွဲမှာသုံးတဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဟာ မလိုအပ်တာတွေရော လိုအပ်တာတွေရောအများကြီးပါ။
မိမိရဲ့လက်ထပ်ပွဲအတွက် စီစဉ်တဲ့အခါ အစိမ်းရောင်လက်ထပ်ပွဲ (Green Wedding )
အဖြစ်စီစဉ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အများနဲ့မတူ တမူထူးခြားပြီး မြေကမ္ဘာအတွက်လည်း အကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သာလွန်မင်းသည် နောင်တော် အနောက်ဖက်လွန်မင်းအား တူတော် မင်းရဲဒိဗ္ဗက လုပ်ကြံနန်းတက်သည်ကို နှိမ်နှင်းပြီးနောက် နန်းတက်သည်။ Continue reading →
ဖခင်ဖြစ်သူ အနောက်ဖက်လွန်မင်းကို လုပ်ကြံကာ ဟံသာဝတီတွင် နန်းတက်သည့် မင်းရဲဒိဗ္ဗ(၁၆၂၈)၏နန်းသက်မှာ တစ်နှစ်ပင်မရှိချေ။ နန်းတက်လျှင် အင်းဝနှင့် စစ်ကိုင်းရှိ သစ္စာခံများကို အကြောင်းကြားကာ သစ္စာပေးသည်။ ထိုနောက်အဝေး(ဇင်းမယ်)ရောက်နေသည့် ဘထွေးတော်များဖြစ်သည့် သတိုးဓမ္မရာဇာ(သာလွန်မင်း) နှင့် မင်းရဲကျော်စွာတို့ကို သံသယများဖြစ်စေရန် သွေးခွဲသည့်အနေဖြင့် စာများစေသည်။ Continue reading →
(၁)ကိုယ်ဘာလုပ်နေလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
Analyze yourself often what you’re doing.
ပြန်လည်သုံးသပ်မှုမရှိရင် ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် ရလာဘ်ကောင်းတွေကို သိရှိနိုင်ဘို့ ခဲယဉ်းလှပါတယ်။
ရလာဘ်ကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်၊ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းကို ပြန်လည်
ဆန်းစစ်ပါ။ ရလာဘ်ကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အောင်မြင်မှုတွေပိုတိုးလာပါလိမ့်မယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အတွက် အဓိကကျတဲ့ ဒီမေးခွန်းလေး ၂ ခုကို မေးကြည့်ကြရအောင်။ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်တော့
ဒီမေးခွန်းလေး ၂ ခုရဲ့အဖြေကို တိတိကျကျ သိဘို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အဖြေမပြောခင် ကျွန်တော့်တို့ အရင်စမ်းစစ်ကြည့်ရအောင်။
ကိုယ့်ရဲ့မိရိုးဖလာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရ အဘိုးအဘွားတွေရှေ့ကလှူဒါန်းသွားလို့ ကိုယ်ကနောက်ကနေ အဲဒီအတိုင်းလိုက်နာမှတ်သားပြီး
လှူဒါန်းမှုတွေပြုနေတာလား (ဒါမှမဟုတ်)သူတစ်ပါးလှူဒါန်းလို့ဂုဏ်ပကာသနတွေမက်မောပြီး လူတကာ အထင်ကြီးအောင်
ပြောစမတ်ပြုအောင် လှူဒါန်းတာလား?(ဒါမှမဟုတ်)စေတနာအရင်းခံသက်သက်ကြောင့်လှူဒါန်းတာလား ?
ရာထူးတွေတက်ချင်လို့မျက်နှာလုပ်ပြီး ဂုဏ်မက်မောကာ အခွင့်အရေးတွေရအောင် လှူဒါန်းလိုက်ကြတာလား?
ကံကံ၏ အကျိုးတရားကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်လို့ အလှူဒါနတွေ စွဲစွဲမြဲမြဲ ပြုလုပ်နေကြတာလား?
နိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အပံ့ တစ်ကယ်ဖြစ်မှန်းသိလို့ ကုသိုလ်ဒါနတွေ နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာလား?
ညောင်ရမ်းမင်းတရားကြီး(၁၆၀၀- ၁၆၀၆)၏ ငယ်မည်မှာ ရှင်သစ္စာဖြစ်သည်။ ဘုရင့်နောင် အိမ်နှိမ့်တွင်ရှိနေစဉ် အရပ်သူခင်ပြည့်စုံနှင့် သင့်မြတ်ပေါင်းသင်းကာ ဖွားမြင်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ နန်းတွင်းသို့ရောက်လာပုံမှာ ကျန်စစ်သား၊သမ္ဘူလနှင့် ရာဇကုမာရ်တို့ ဇာတ်လမ်းကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ Continue reading →
တပင်ရွှေထီး၊ဘုရင့်နောင် တို့တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဒုတိယပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံကြီးသည် ဘုရင့်နောင်၏ သားတော် နန္ဒဘုရင် လက်ထက်အရောက်တွင် အချိန်တိုတိုဖြင့် လွယ်ကူစွာပြိုကွဲသွားရပြီးနောက် နိုင်ငံတ၀န်းလုံးတွင် ပဒေသရာဇ်ငယ်များ တစ်နယ်တစ်မင်း အသီးသီး ထူထောင်ကြပြီး အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေတွင် ဘုရင့်နောင်၏ သားတော် တစ်ပါးဖြစ်သည့် မင်းရဲနန္ဒမိတ်ဘွဲ့ခံ ညောင်ရမ်းစား ရှင်သစ္စာသည် မဟာသီဟသူရဘွဲ့ဖြင့် ညောင်ရမ်းမင်းဆက်(၁၆၀၀-၁၇၅၂) ကိုစတင်တည်ထောင်သည်။၄င်းနှင့် ၄င်းနောက် နန်းတက်ကြသည့် အနောက်ဖက်လွန်မင်း၊သာလွန်မင်း တို့သည် အင်းဝ၊ပြည်၊တောင်ငူ၊ဟံသာဝတီ နှင့် သန်လျင်စသည့် ဒေသများကို အစဉ်အဆက် သိမ်းပိုက်ကာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုများကို အဆုံးသတ်ခဲ့ကြသည်။